समाज Archives - Page 102 of 157 - A complete Nepali news portal based on news & views political, economy, sports, analytical reports, entertainment, social, national-international news
२३ मंसिर २०७४, शनिबार २०:०९ December 9, 2017 Nonstop Khabar
दाङ, २३ मंसिर । माअाेवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएका छन । दाङ २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका महराले नेपाली कांग्रेसका राजु खनाललार्इ पराजित गरी विजयी भएका हुन् । महराले कांग्रेस उम्मेदवार १३ हजार ९ सय २३ मतकाे अन्तरले पराजित गरेका छन् । महराले ३९ हजार ९ सय […]
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १९:५६ December 9, 2017 Nonstop Khabar
गाेरखा, २३ मंसिर । डा. बाबुराम भट्टराई गोरखा क्षेत्रनम्बर १ बाट विजयी भएका छन् । गाेरखा २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा भट्टरार्इले वामगठबन्धनका नारायणकाजी श्रेष्ठलार्इ पराजित गरेर विजयी भएका हुन् । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक समेत रहेका बाबुरामले माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ६ हजार ८ सय ७४ मतान्तरले पराजित गरेका छन् । भट्टराईले ३१ हजार […]
गोरखा २ मा बाबुराम भट्टरार्इको जित पक्का
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १७:०८ December 9, 2017 Nonstop Khabar
गोरखा, २३ मंसिर । नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टरार्इ गाेरखाबाट जित नजिक पुगेका छन् । वामगठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका माअाेवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी भट्टरार्इलार्इ निरन्तर पछाडि पार्दै भट्टरार्इ जितकाे नजिक पुगेका हुन् । पछिल्लाे मत परिणाम अनुसार गाेरखा २ मा भट्टरार्इ श्रेष्ठभन्दा ४९ सय मत अन्तरले अगाडि छन् । भट्टरार्इले २७ हजार २ सय २३ मत प्राप्त […]
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १५:१५ December 9, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, २३ मंसिर । नयाँ बसपार्कस्थित एक हाेटलमा रहस्यमय घटना घटेको छ । बसपार्कस्थित मंगलमय शुभकामना गेस्ट हाउसमा एक पुरुष मृत अबस्थामा भेटिएका छन्। बसपार्क नजिकै रहेको उक्त गेस्ट हाउसमा केही दिनदेखि श्रीमतीसँगै बस्दै आएका बाबुराम केसीले ‘आत्महत्या’ गरेको प्रहरीले बताएको छ । प्रहरी प्रभाग बसपार्कका असई प्रकाश राउतले दिएको जानकारीअनुसार शनिबार विहान उनि झुण्डिएको […]
२३ मंसिर २०७४, शनिबार १४:०७ December 9, 2017 Nonstop Khabar
जाजरकाेट, २२ मंसिर । जाजरकाेटबाट प्रतिनिधि सभाका लागि नेकपा (माअाेवादी केन्द्र)का शक्तिबहादुर बस्नेत विजयी भएका छन् । वाम गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाकाे उम्मेदवार बनेका पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले नेपाली कांग्रेसका राजिव शाहलार्इ पराजित गरेका हुन् । बस्नेतले शाहलार्इ ८ हजार ९ सय ९२ मत अन्तरले पराजित गरेका हुन् । बस्नेतले ३२ हजार २ सय […]
मतदान सम्पन्न गरी फर्कदै गरेका २ प्रहरीसहित ३ काे मृत्यु
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १२:५२ December 8, 2017 Nonstop Khabar
मकवानपुर, २२ मंसिर । बिहिबार भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरी जिल्ला सदरमुकाम हेटौंडा फर्कँदै गरेको जीप दुर्घटना भएको छ । थाहा नगरपालिकाबाट शुक्रबार बिहान हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको जीप भीमफेदी गाउँपालिका–२, चुनियाँमा दुर्घटना हुँदा चालक र दुई म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको प्रहरी चौकी भैंसेले जनाएको छ । चालक र म्यादी […]
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०२:५९ December 8, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, २२ मंसिर । उम्मेदवारी घाेषणादेखि नै चर्चामा रहेका गुण्डा नार्इके राजिव गुरुङ अर्थात दिपक मनाङेले अन्तत: चुनाव जितेरै छाडेका छन् । मनाङे मनाङ प्रदेश ख बाट विजयी भएका हुन् । मनाङे २ हजार ४१० मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसका कर्म गुरुङलार्इ ३ सय ९० मत अन्तरले पराजित गरेका छन् […]
२१ मंसिर २०७४, बिहीबार २०:२२ December 9, 2017 Nonstop Khabar
अाज सम्पन्न दाेस्राे चरणकाे निर्वाचनमा कूल ६७ प्रतिशत मत खसेकाे छ । मतदान सम्पन्न भएपछि निर्वाचन अायाेगले पत्रकार सम्मेलनकाे अायाेजना गरी यसकाे जानकारी दिएकाे हाे । पत्रकार सम्मेलनमा अायाेगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले करिव ६७ प्रतिशत मत खसेको जानकारी दिए । अाज भएकाे दाेस्राे चरणकाे निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका लागि १२८ र प्रदेशसभाका लागि २५६ पदका लागि मतदान […]
रुकुमका दुबै जिल्लामा वामगठबन्धनकाे एकलाैटी जितकाे दावी
२१ मंसिर २०७४, बिहीबार १९:४१ December 7, 2017 Nonstop Khabar
रुकुम, २१ मंसिर । रुकुमका दुबै जिल्लामा मत गणना सुरु भएकाे छ । प्रारम्भिक मतगणनाअनुसार रुकुममा बाम गठबन्धनले एकलाैटी परिणाम अाफ्नाे हातमा पार्ने देखिएकाे छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत दुर्गाप्रसाद भुसालका अनुसार तीन गाउँपालिकाका एक-एक वडाका मतपेटिका सँगै राखेर मत गणना भइरहेको छ । अहिले प्रतिनिधि सभाको मतगणना सुरुभएको भुसालले जानकारी दिए । यसैगरी पश्चिम […]
२१ मंसिर २०७४, बिहीबार १३:०४ December 7, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, २१ मंसिर । भोट हाल्न गएका दुई वृद्धवृद्धाको मृत्यु भएको छ । डोटीमा मतदान गर्न जाने क्रममा र पाल्पामा मतदान गरेर फर्किने क्रममा उनीहरुको मृत्यु भएको हो । पाल्पाको पाल्पा रामपुर नगरपालिका–६ को दरैठाटी मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेलगत्तै ८० वर्षीय झुलबहादुर कुमालको मृत्यु भएको छ । वडाका वडाध्यक्ष हुमनाथ न्यौपानेका अनुसार रामपुर नगरपालिका–६ का […]